Ayaqina amathemba ngeHIV | isiZulu
Ayaqina amathemba ngeHIV
Ukukhathazeka ngokunyuka kwe-HIV e-Australia
Abesilisa basemathubeni amaningi okubulawa yi-HIV
Johannesburg - Abacwaningi eNyuvesi yaseWits babe negalelo elikhulu empumelelweni ekubikwe ngayo embikweni weNature Medicine, oveze ukuthi sekunohlelo olusha olutholakele olungavikela igciwane lengculaza ngamaphesenti angu-88.
Lezi zindaba ziqinisa amathemba okuthi ngokuhamba kwesikhathi kungase kutholakale ikhambi lokwelapha lolu bhubhane.
Ucwaningo lwenziwe yisikhungo iCentre for the Aids Programme of Research in South Africa (CAPRISA), sisebenzisana nochwepheshe baseWits University, yisikhungo iNational Institute for Communicable Diseases (NICD), yi-University of KwaZulu-Natal kanye ne-University of Cape Town.
Ucwaningo ludonse iminyaka emihlanu, bekucwaningwa abesifazane ababili abaphila naleli gciwane, kutholakale ukuthi kunendlela ekungenziwa ngayo ukuqinisa amasosha bese umuntu evikeleka ezinhlobeni zeHIV eziyisishiyagalolunye kweziyishumi ezikhona.
UNgqongqoshe woMnyango wezeMpilo u-Aaron Motsoaledi usencome ososayensi abaqhamuke nalendlela entsha engavikela abantu ekutheni bangenwe yigciwane lengculaza, wancoma nalaba besifazane abavume ukuba yingxenye yocwaningo.
Namanje akukaziwa ukuthi zabulawa yini izingane ezimbili enkulisa ese-KZN
Akucaci ukuthi yini eholele ekutheni kushone izingane ezimbili enkulisa eWeza, eduzane naseHarding, KwaZulu-Natal ngomhlaka-22 Mashi, okuyisigameko esaholela ekutheni amaphoyisa avule amadokodo.